Myanmar agrees to the appointment of Mr. Mohammad Sufiur Rahman as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of Bangladesh to the Republic of the Union of Myanmar in succession to His Excellency Mr. Anup Kumar Chakma – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Myanmar agrees to the appointment of Mr. Mohammad Sufiur Rahman as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of Bangladesh to the Republic of the Union of Myanmar in succession to His Excellency Mr. Anup Kumar Chakma
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Mohammad Sufiur Rahman as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People’s Republic of Bangladesh to the Republic of the Union of Myanmar in succession to His Excellency Mr. Anup Kumar Chakma.
Mr. Mohammad Sufiur Rahman was born in 1964, and holds degrees of B.Sc (Civil Engineering) from Bangladesh University of Engineering and Technology(BUET), Dhaka and MBA from the Institute of Business Administration, Dhaka University. He joined the Ministry of Foreign Affairs of Bangladesh in 1991 as Assistant Secretary. During his diplomatic career, he has held various positions at Bangladesh High Commission offices abroad: New Delhi (1995-1999), Bangladesh Permanent Mission to UN in Geneva (1999 to 2002) and Islamabad (2008-2010). He also served as Director General of SAARC Department and Economic Affairs Department in the Ministry of Foreign Affairs from August 2010 to September 2012.
Mr. Mohammad Sufiur Rahman is presently serving as Bangladesh High Commissioner to Sri Lanka. He is married with two daughters andason.
Dated: 8 July 2014.
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ အာနု ကူးမား ချက်ကမာ ၏ နေရာတွင် မစ္စတာ မိုဟာမက် ဆူဖီအူရ် ရာဟ်မာန်အား ခန့်အပ်ရန်အဆိုပြုချက်ကို ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီးြဖစ်သည်။
မစ္စတာ မိုဟာမက် ဆူဖီအူရ် ရာဟ် မာန်ကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ကူရီဂရမ်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် ဒါကာမြို့ရှိ အင်ဂျင်နီယာနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့နှင့် ဒါကာမြို့ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ(မဟာဘွဲ့)တို့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၌ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၂၆ ရက်နေ့တွင် လက်ထောက်အတွင်းဝန်ရာထူးဖြင့် စတင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည်ပြည်ပရှိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မဟာမင်းကြီးရုံးများတွင်ရာထူး အဆင်‌့ဆင်‌့ ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရာ နယူးဒေလီမြို့တွင် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အထိလည်းကောင်း၊ ဂျီနီဗာမြို့၊ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံးတွင် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိလည်းကောင်း၊ အစ္စလာမာဘတ်မြို့တွင် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အထိ လည်းကောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန တွင် ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ အထိ တောင်အာရှနိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့(ဆာ့ခ်)ဦးစီးဌာနနှင့်စီးပွားရေးဦးစီးဌာနတို့တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
လက်ရှိတွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်ရှိသူဖြစ်ပြီး သမီး(၂)ယောက်နှင်‌့ သား(၁) ယောက်ရှိပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၈ ရက်